भागिरथी ह'त्या का'ण्ड : के भएको थियो त्यो दिन ?
भागिरथी ह’त्या का’ण्ड : के भएको थियो त्यो दिन ?
बैतडी, ५ फागुन । बैतडीको दोगडाकेदार ७ की १७ वर्षीय किशोरी भागिरथी भट्टको ह’त्यामा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीले घ’टनामा संलग्न रहेको साबिती बयानका आधारमा भागिरथी पढ्ने सनातन माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत दिनेश भट्टलाई पक्राउ गरी बुधवार सार्वजनिक गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमका डिआइजी उत्तमराज सुवेदीले भट्टले नै भागीरथीको ह’त्या गरेको दाबी गरे । “आ’रोपित व्यक्तिको लोकेसन त्यही घटना स्थलमा भएको देखियो ।” उनले भने, “टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनले लोकेसनले त्यही देखाउनु र बयानमा ह’त्या गरेको स्वीकार गर्नुले नै ह’त्या निजले गरेको निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ ।”
डिआइजी सुबेदीले पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीको अनु’सन्धा’नमा श’ङ्का नगरिदिन समेत आग्रह गरे । पत्रकारहरूले कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको जस्तो घटनामा नक्कली अभियु’क्त खडा गरे जस्तै यो केसमा पनि भयो भने के हुन्छ भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा सुवेदीले भने, उनले भागिरथी ह’त्या प्रकरण कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त प्रक’रण जस्तो नहोस् भन्नेमा प्रहरी सतर्क रहेको बताए । “प्रहरीको अनु’सन्धा’नमा श’ङ्का नगरिदिन विनम्र अनुरोध गर्छु । त्रु’टि रहित ढङ्गले सबुत सङ्कलन गरेका छौँ ।”
जिल्ला अस्पताल बैतडीले भागीरथीको यौ’ना’ङ्गमा यौ’नजन्य गतिविधि भएको र घाँटी नि’मोठे’र ह’त्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रहरीलाई बुझाएको छ । घटनाको प्रकृति हेर्दा पनि भागीरथीको तल्लो अ’ङ्गको वस्त्रहरू फु’कालि’एका छन् भने उनको यौ’ना’ङ्गबाट धेरै र’गत बगिरहेको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
के भएको थियो त्यो दिन ?
विद्यालयबाट माघ २१ गते दिउँसो २ बजे एक्लै फर्किंदै गरेको मौका पारेर भागरथीलाई बाटो छेउको जंगलमा बला’त्कार पछि ह’त्या गरिएको प्रहरी अनुसन्धान बाट पुष्टि भएको छ । साँझ सम्म पनि घर नफर्के पछि मोबाइल स्वीच अफ भएको पाइएको र भोलि पल्ट दिउँसो ४ बजे स्थानीय लडालेकको लबलेक जंगलको सडक छेउबाट अन्दाजी ३० मिटर तल मृ’त अवस्थामा फेला पारिएको थियो ।
दिनेशले घचेट्दै जंगलको खोल्सामा लडाई पहिले बला’त्कार र त्यसपछि ह’त्या गरेको केन्द्रीय अनु’सन्धा’न ब्यूरो सिआइबी र प्रदेश प्रहरीको संयुक्त अनु’सन्धा’न बाट खुलेको छ । मृ’त अवस्थामा भेटिएकी किशोरीको टाउकोमा चो’ट,घाँटीमा दबाइएको नील डा’म,खुट्टाको औंलामा पनि डा’म र शरी’रको तल्लो भागको संवे’दनशील अं’गबाट रग’तजस्तै पदार्थ समेत बगेको थियो ।
घ’टना लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा मृ’तक भागरथीका दाइले दिएको किटानी जाहेरी सँगै प्रहरीले दिनेश माथि अनु’सन्धा’न सोझ्याएको थियो । अनु’सन्धा’न र सोधपुछको क्रममा दिएको बयान, घ’टनामा संलग्नताको आधार र टेलिफोन ट्रयाक तथा लोकेशनको आधारमा दिनेशको अ’पराध पुष्टि भएपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
भागरथीको ह’त्याको बि’रोधमा स्थानीयवासीले आयोजना गरेको वि’रोध कार्यक्रममा समेत दिनेशले सहभागिता जनाउँदै आएका थिए । अन्ततः प्रहरी सँग भट्टले मृ’तक भागरथीका बुबाले आफ्नी फुपुलाई दु’र्ब्यवहा’र गरेकोमा त्यसैको रिसि’वी साँधेको बताएका छन् । भागरथीका बुबाको हालै निधन भइसकेको छ ।
घ’टनाको दिन दिनेश विद्यालयको अन्तिम कक्षा बहि’स्कार गरेर घर हिँडेको र घ’टना स्थलमा भागरथी भन्दा पहिल्यै पुगेर पर्खि बसेको प्रहरी अनु’सन्धा’न बाट खुलेको छ । सडकको माथिल्लो भागमा पर्खेर बसेका भट्टले किशोरीलाई खोल्सा नजिकै बाट बाटो भन्दा तलतिर ध’केलेर लडा’एका थिए । त्यसपछि सबै काम सकेर भागरथीको साथमा रहेको मोबाइलको ब्याट्री झिकी घ’टना स्थल नजिकै फालिदिएको र त्यहि बाटो हुँदै घर गएको तथ्य समेत प्रहरीले पत्ता लगाएको छ ।
चुनाव हुन्छ वा हुँदैन, अदालतको निर्णय आउन बाँकी, निर्वाचन आयोगले अघि बढायो चुनावको तयारी